Andramo ny fahalalanao ny famolavolana UX / UI amin'ity lalao an-tserasera ity | Famoronana an-tserasera
Manuel Ramirez | | Famolavolana tranonkala, maro
Can't Unsee dia lalao an-tserasera mahatsikaiky sy liana izany dia hitsapana ny haavon'ny fahalalanao UX. Izany hoe hametraka karatra roa samy hafa izay tsy maintsy safidintsika hoe iza no toa marina amin'ny famolavolana ny singa tsirairay mandrafitra azy.
Amin'izany fomba izany dia handalo fitsapana samihafa isika hamita ity lalao an-tserasera ity izay, amin'ny antsipiriany kely dia ho fantatsika ny haavon'ny fanoloran-tena mila mijery tranokala amin'ny fomba tsara indrindra isika.
Can´t Unsee dia a lalao an-tserasera noforonin'i Alex Kotliarskyi ary mametraka ny lantom-peony amin'ireo antsipiriany kely rehetra mahatonga ny famolavolana tranonkala iray tena tsara. Io no fahasamihafana lehibe eo amin'ny zavatra mety takiana amin'ny mpanjifa rehefa asehontsika azy ny teti-bola sy izay tsy.
Araka ny efa nolazainay, amin'ny fihodinana tsirairay dia ho hitantsika izany sary roa mitovy amin'ny interface tsara. Ny tsy maintsy manapa-kevitra amin'ny tsindry iray amin'ireo amin'izy ireo no tena endriny marina. Raha vantany vao vita ny fifantenana, dia tsy afaka mamela anao hahita ny fampitahana amin'ny sary iray apetraka amin'ny sary iray hafa ny Can´t Unsee hahafahanay mahita ny tsy fitovizany.
Indraindray dia ho ny haben'ny bokotra, ny hafa fotsiny ny lanjan'ilay endritsoratra mba handrosoantsika amin'ity lalao mahaliana ity izay azo antoka fa ho mora ho an'ireo izay manomboka amin'ny famolavolana tranonkala.
Ny zavatra tokana izay tsy amin'ny teny espaniola, na dia ho an'ny mahay manavaka ny hadisoana amin'ny famolavolana eo anelanelan'ny sary roa na koa tsy ilaina. Ny tsara indrindra, isaky ny mandalo fihodinana isika dia hitombo ny fahasarotana, mba hahafahanay mizaha toetra ny fahalalantsika ny famolavolana UX.
Iray amin'ireo fitaovana ireo izay ahafahan'ny mpampianatra maro mizaha toetra ny mpianatrao handinika ny tena fahalalana momba ny interface azonao. Manoro anao izahay koa manandrama lalao hafa mifandraika amin'ny loko.
El rohy mankany amin'ny lalao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Famolavolana tranonkala » Andramo ny haavon'ny fahalalanao momba UI amin'ity lalao an-tserasera ity